Barnaamijyada Abaalmarinta waxay horseedaan Guusha Suuqgeynta iimaylka | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Barnaamijyada Abaalmarinta waxay horseedaan Guusha suuqgeynta iimaylka
Barnaamijyada Abaalmarinta waxay horseedaan Guusha suuqgeynta iimaylka
Mudnaanta ugu sareysa ee shirkadaha ecommerce waa inay soo jiitaan taraafikada isbeddelka sare leh. Suuqgeynta iimaylka waa buundo muhiim ah oo lagu soo jiito rajada wax lagu baadho oo laga dukaameysto. Si kastaba ha ahaatee, tartanka iimaylka ee kordhay iyo mashquulinta moobiilka ayaa sii adkeynaya in la soo baxo.
Barnaamij abaal-marineed ayaa ku caawin kara. Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa faa'iidooyinka barnaamijyada abaal-marinta iyo tusaalooyinka fulinta guusha leh.
Barnaamijka abaal-marintu wuxuu kobcin karaa dakhliga, kordhin karaa daacadnimada, wuxuuna dhalin karaa iibsadayaal cusub. Barnaamijyada guulaystay waa:
Fududahay in la fahmo. Barnaamijyada ugu fiican waa aasaas iyo toos. Uma baahna xisaabiye si ay u fahmaan. Kuwo badan ayaa bixiya boqolkiiba ama qaddar go'an, sida 5-boqolkiiba dib u celinta $1 kasta oo la isticmaalo, ama 10 dhibcood $ 100 kasta.
Atoomaati ah Barnaamijyada abaal-marintu waa inay u baahan yihiin dadaal maamul oo yar oo ka yimaada ganacsatada. iimaylada la kiciyay ayaa lama huraan u ah wargelinta ka qaybgalayaasha. Hadhaaga abaalgudka waa in si toos ah loo xisaabiyaa. Dukaamada jidhku waa inay soo diraan iimaylo toos ah ka dib iibsi kasta.
Dadaal la'aan. Sida ay u fududahay in la is-diiwaangeliyo, ayaa ka qaybqaadashadu sii badanaysaa.
Qiimaha sare. Barnaamijku waa inuu bixiyaa faa'iidooyin la taaban karo, oo macquul ah isticmaalayaasha. Ka fogow waqtiyada la dheereeyey iyo meelaha sare.
Iimaylku waa mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan ee lagu wado taraafikada. Natiijadu waa iimeyl suuqgeyn ah oo ba'an, kaas oo u abuuraya sanduuqa-soo-saarka macaamiisha, kuwaas oo aan u badnayn inay ka fikiraan soo jeedin kasta.
Taa baddalkeeda, macaamiishu way baadhayaan oo tirtiraan - iyaga oo sawiraya sanduuqa-galka si ay u helaan macluumaad habboon oo waxtar leh. Abaalmarinta aasaasiga ah waa:
Muhiimad Leh. Maadaama abaalgudyadu ay ku xidhan yihiin iibsiyadii hore, iimayl kastaa aad buu u khuseeyaa.
Xiiso leh. Macaamiisha waxay rabaan in la abaalmariyo. Waxa ku jira iimaylka abaal-marintu waxa ku jiri kara dhibcooyinka la kasbaday, dhibcaha looga baahan yahay abaal-marinta soo socota, ama alaabada u-qalanta ee madax furashada.
Degdeg Iimayllada abaal-marintu waxay xasuusin karaan ka qaybgalayaasha wadarta dhibcaha iibka ka dib ama xidhitaannada la heli karo.
Faa'iido leh. Ku dhiirigeli qaataha inay kaydiyaan iimaylka iyagoo ku daraya dhammaan macluumaadka si ay u galaan, ula socdaan, ama u soo furtaan.
Ulta Beauty's iimaylka hoose waxa ku jira hab fudud oo la fahmi karo, tilmaamo ku saabsan sida iyo goorta la soo furanayo dhibcaha, iyo $5 kuuban oo ku soo jiidata isticmaalayaasha inay ku kaydiyaan sanduuqa-galka. Noocyada qiimaha leh sida Ulta waxay isticmaalaan barnaamijyada abaal-marinnada si ay u dhiirigeliyaan daacadnimada oo ay ula dagaallamaan tartamayaasha qiimaha jaban, oo ay ku jiraan dukaamada tafaariiqda waaweyn iyo silsiladaha farmashiyaha.
Abaalmarinta Ulta waxay dhiirigelisaa daacadnimada waxayna la dagaallamaan tartamayaasha qiimaha jaban.
Loft, tafaariiqda dharka dumarka, waxay bixisaa 100 abaal-marin ah marka ka qaybgalayaashu dhamaystiraan muuqaalkooda. Tani waxay ka caawisaa Loft inay fahmaan macaamiisheeda, taas oo awood u siinaysa ololeyaal suuq-geyneed oo badan oo khuseeya.
Loft wuxuu bixiyaa 100 dhibcood oo abaal-marin ah marka ka qaybgalayaashu ay dhammaystiraan muuqaalkooda.
Kohl's wuxuu u soo diraa macaamiisha iimaylo dabagal ah isla markiiba ka dib wax iibsiga dukaanka dhexdiisa. Farriinta ayaa cusboonaysiisa “Yes2You” dheelitirnaanta dhibcaha waxayna xoojisaa faa'iidooyinka wax iibsiga ee Kohl's. Abuuritaanka sabab ay macaamiishu ugu sii jiraan astaantaada waxay xaqiijin kartaa korriinka muddada dheer. (Amazon Prime, shil ahaan, waxaa lagu doodi karaa inuu yahay barnaamijka daacadnimada ugu guusha badan abid, oo leh 82 boqolkiiba qoysaska Mareykanka.)
Kohl's wuxuu iimaylka u soo diraa macaamiisha isla markaaba ka dib wax iibsiga dukaanka dhexdiisa, oo ay la socoto cusboonaysiinta "Yes2You" abaal-marinta dhibcaha.
Sida loo doorto Dekedda SMTP ee saxda ah (Port 25, 587, 465, ama 2525)
Jidka gaaban wuxuu damiyaa maqalka iPhone marka aad gasho Ha dhibin